Soomaali argagaxiso loo heysto - BBC News Somali
Soomaali argagaxiso loo heysto
8 Oktoobar 2010
Qareenada nin Soomaali ah oo argagixiso loogu heysto Britain ayaa sheegay in dikumiintiga uu heystay oo uu kala baxay internet-ka uu ku caawinyay sidii ciidamada Ethiopia looga xoreyn lahaa Soomaaliya.
Muuse Saciid Yusuf, waxa lagu soo oogay dacwad, iyadoo la cuksanayo qeybta 58 ee sharciga argagaxisada ee waddankan UK oo la soo saaray sanadkii 2000, kaasi oo ka dhigaya dambiile qofkii lagu helo inuu heysto qalab loo isticmaali karo argagaxiso.
Maxkamaddu waxa ay dhageysatay markii ciidamada booliisku ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku yaalla magaalada Leicester ee waddankan Britian bishii May ee sanadkii 2008.
Waxa ay ka heleen guriga laba saxamada wax lagu keydiyo ee computerada oo ay ku jireen macluumaad aad u badan, sida laba vidoe oo muujinaya tababar, iyo buug gacmeed aragagxiso ee kooxda Mujaahidiin.
Max Hill oo dacwad oogasha dhinaca dowladda Britain ah ayaa maanta waxa uu sheegay in aanay muran ku jirin in Mr Yusuf uu haystay dikumiinti argagaxiso.
Waxa kaliya ee uu isku daafici karana ay tahay inuu keeno cudur daar macquul ah oo ku saabsan sababta uu u heystay.
Marka dadka dacwadda ku soo oogayo waajib kuma aha inay cadeeyaan in Mr Yusuf uu damacsanaa inuu u istcimaalo waxyaabaha uu hayay.
Waxa kale oo aad u muhiim ah in kooxda u doodaysa Mr Yusuf ee difaacaysa ay u sheegeen maxkmadda in uu vidoeska iyo dukimiintigaba ka soo download gareeyay ama uu kala soo baxay internetka.
Laakiin uu arrintaasi u sameeyay inuu damacsanaa Soomaaliya inuu aado horaantii sanadkii 2007 asi uu ula dagaallamo ciidamadii Ethiopia ee qabsaday Soomaaliya.
Waxaad xasuusataa in dhamaadkii 2006 in ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya si ay u raacdeystaan ciidamadii Midowgii Maxkamadaha Islaamiga, oo markaasi gacanta ku hayay magaalada Muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya.
Qareenada u doodaya Mr Yusuf waxa ay maxkamadda u sheegeen in uu dikumiintiga u arkay in loo isticmaali karay iska caabintii Ethiopia ee xoogaggii Soomaalida oo u dagaallamayay waxa uu aamisan yahay inay ahayd dal ku soo duulay.
Haddaba xeer beegtidii dacwadda dhageysaneysay oo ka koobnaa 12 rag iyo dumar isugu jira oo ka kala yimid UK, ayaa waxa ay eegayeen saddex maalmood cadeymo ay bixinayeen xubno ka tirsan hogaankii iska caabinta ee Soomaaliya, oo ku saabsan xaaladda ee halkaasi ka jirtay.
Laakiin isagoo hadalkiisa soo koobayay ayaa dacwad oogey Max Hill waxa uu ku dooday in Mr Yusuf si ula kac ah uu u soo uruuriyay kadibna uu keydiyay dhamaan waxyaabaha uu hayay, isla mar ahaantaan u gudbinta kooxaha iska caabinta ee Soomaaliya in aan loo arki karin wax ay ka faa'iidayaan Soomaalida.
Waxa uu intaa ku daray in maxkamaddui aanay ahayn sax ama khalad ahaanshaha dagaalka sokeeye ee Soomaaliya, ee in arrintu ay tahay inuu heystay dikumiintigaasi aragagixiso.
Maxkamadda ayaa sii socon doonta, waxaana la filayaa in xeer beegtida la diri doono maalinta Isniinta, markaa taasi micnaheedu waxa weeye in lagu dhawaaqo doono xukunka xilli ka mid ah toddobaadka soo socda.